Eric Schmidt, Madaxweynaha alifbeetada iyo Agaasimihii hore ee Google wuxuu adeegsadaa iPhone | Wararka IPhone
Eric Schmidt, Madaxweynaha Alphabet iyo madaxii hore ee Google wuxuu adeegsadaa iPhone
Maaha markii ugu horaysay mana noqon doonto markii ugu dambaysay ee maamule sare oo shirkad tiknoolajiyadeed u heellan horumarinta barnaamijka softiweerka, soo saarista aaladaha moobaylka ama uu caan ku kiraysto mid ka mid ah shirkadahaas waxaa lagu ugaarsadaa iyadoo la adeegsanayo qalab tartamaya.
Toddobaadyo ka hor ayaanu ku tusnay sida uu u yeeshay madaxweyne ku-xigeenka Windows 10 Mobile Joe Belfiore dhajiyay dhoor tweets intaad fasax ku jirtay iPhone, halkii laga isticmaali lahaa mid ka mid ah labada moodel ee ay dhowaan bilaabeen. Wuxuu isku cadeeyay inuu cadeeyay inay tahay inuu tijaabiyo taleefan kasta oo suuqa yaala si uu u arko sababta ay dadku sidaa ugu jecel yihiin.
Markan kan gacanta lagu soo dhigay isagoo gacanta lagu hayo ayaa ah Eric Schmidt, Agaasimihii hore ee Google hadana ah madaxweynaha Alphabet, ee Google iska leh. Schmidt wuxuu aaday Kuuriyada Koofureed, halkaas oo ay ku taalo xarunta dhexe ee Samsung, si uu goobjoog uga noqdo khilaafka u dhexeeya kumbuyuutarka sirdoonka macmalka ah ee ka dhanka ah ciyaaryahanka ugu fiican Go ee xilligan.
Intii ay socotay munaasabaddu, sida aan ka arki karno sawirka hoggaaminaya qodobkaan, waxay noqon kartaa sida Schmidt wuxuu dhowr sawir ku qaataa iPhone (ma ogin nooca saxda ah) iyo la wadaagida iyaga hadhow. Waa wax la yaab leh in mid ka mid ah kuwa ugu mas'uul ka ah Android, uusan isticmaalin mid ka mid ah moodooyinka calanka ee kala duwan ee soo saarayaashu ay ka bilaabayaan suuqa, sida Samsung S7 sidii ay ugu jirtay Samsung kasta.
Waxay umuuqataa Schmidt, yaa fwuxuu ka mid noqday guddiga maamulka Apple inta udhaxeysa 2006 iyo 2009, waxay sii wadaa inay daacad u ahaato shirkada fadhigeedu yahay Cupertino. Laakiin ma ahan markii ugu horeysay ee Schmidt lagu qabto isagoo aalad adeegsanaya shirkad ay iska soo horjeedaan. Intii uu ku jiray guddiga maamulka Apple, waxaa lagu arki karaa isaga in ka badan hal munaasabad isaga oo wata Blackberry.
By habka, kombiyuutarka guuleystay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Eric Schmidt, Madaxweynaha Alphabet iyo madaxii hore ee Google wuxuu adeegsadaa iPhone
Hooray ee Mr. Eric, taasi waxay cadeyneysaa waxa aan marwalba dhaho: android waa a & @ € ?; $ £ * ^% #} ~
Dib u eegista kiiska Spigen Tough Armor ee Apple Watch
Pangu wuxuu ballan-qaadayaa in xabsiga laga sii daayo jiilka afraad ee Apple TV usbuuca soo socda